That's so good, right?: ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လိင်တူချစ်သူ (အမျိုးသား)များ ရဟန်းပြုခွင့်ရ မရ ?
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လိင်တူချစ်သူ (အမျိုးသား)များ ရဟန်းပြုခွင့်ရ မရ ?
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသားတို့အတွက် ခေတ္တခဏမျှဖြစ်စေ ရဟန်းဘောင်တက်ခွင့်ရခြင်းသည် ဘ၀အတွက် အလွန်ပင်မွန် မြတ်၍ အရေးကြီးသော အခွင့်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း ? ခိုင်လုံ သော အကြောင်းပြချက်များစွာ ရှိသည့်အနက်မှ ယခုဘုရား ၅ဆူ ပွင့်ရာ ဤဘဒ္ဒကမ္ဘာတွင် နောက်ဆုံး ပွင့်တော် မူခဲ့သော ဂေါတဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည် ဘုရားဖြစ်ရန် ဆည်းပူးဖြည့်ကျင့်ခဲ့ရသော ပါရမီဖြည့်ရာဘ၀ လေးသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်းတိုင်ရှိခဲ့ သော်လည်းရဟန်းဘ၀ကို (၉) ဘ၀သာရရှိခဲ့ပေသည်။ ဤ အချက်တစ်ခု တည်းကပင်ရဟန်းဘ၀သို့ရာက်ရှိရခြင်း၏ အဖိုးတန်မှုကို ကောင်းစွာသိနိုင် ပေသည်။
ထိုပြင် မြတ်စွာဘုရားသက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကပင် ကိုယ်တော်မြတ်ဆွမ်းခံပြန်၍ သီတင်းသုံးရာကျောင်းတော်သို့ရောက်စဉ် ခြေတော် ဆေးရာခုံ၌ ခြေတော်ဆေးရင်း နောက်ပါ သံဃာတော် တို့အား နုတ်တော်ကပင်ဖွင့်၍ 'ချစ်သားတို့ လူ့ဘ၀သည်ရခဲ့၏၊ဘုရားပွင့်ရာအခါသည်ကြုံခဲ၏၊ ရဟန်းဘ၀သို့ရောက်ရှိရန်ခက်ခဲ၏၊ မြတ်သောတရားကိုကျင့်ကြံ အားထုတ်ဖို့ရန်အတွက်ခက်ခဲ၏။ မြတ်သောတရားကို ယုံကြည်သောသဒ္ဓါတရားနှင့်ပြည့်စုံ ခြင်းသည်ခက်ခဲ၏။'' ဟု ကြုံကြိုက်ခက်ခဲလှသော ဒုလ္လဗ္ဘတရား ၅ပါးကို နေ့စဉ် မိန့်မြွတ် ဆုံးမ တော်မူခဲ့သည်။ ဤ အချက်သည်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသားတို့အဖို့ မွန်မြတ်သော ရဟန်း ဘ၀သို့ရောက် ရှိရန်အတွက် မည်မျှခက်ခဲသည်ကိုသိနိုင်ပေသည်။
ရဟန်းဘ၀ရောက်ရှိခြင်းသည်မည်သို့သော အကျိုးထူးကိုရသနည်းဟူသည်ကိုမူ ရွှေပါရမီ တောရ ဆရာတော် အ၇ှင်ဆန္ဒာဓိက ၏ လေအတိုင်းဖြေရလျှင်'ကုသိုလ်အများကြီးရချင်လို့" ဟုသာပြောရပေမည်။ အကျယ်သိလို လျှင်မူ ဆရာတော်ရေးသားတော်မူသော'ရဟန်းဘာကြောင့် ၀တ် ရလည်း" စာအုပ်ကိုသာရှာဖတ်စေလိုကြောင်း လက်တို့ လိုက်ရပေသည်။( ဤစာမူရေသားရန် ရွှေပါရမီတောရ မှအင်တာနက်အသုံးပြုခ စပွန်ဆာမပေးပါ ကြောင်းသိစေ အပ်ပါ သည်း) ဤနေရာတွင်မူ သက်ဆိုင်သည့်အကြောင်းအရာကိုသာ ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသားများ ရဟန်းဘောင်သို့တက်လှမ်းရန် သိက္ခာတင်ရန်အတွက် သိမ်တော်အတွင်း ရှိနေစဉ် ရဟန်းလောင်းဘ၀၌ အစဉ်မေးမြန်းလေ့ရှိသော မေးခွန်းများအနက် " သင်ယောက်ျားစင်စစ်ဖြစ်ပါရဲ့လား' ဟူသော မေးခွန်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လိင်တူချစ်သူ(အမျိုးသား)များ အတွက် ကြီးစွာသောအခက်အခဲဖြစ်မည်ဟုယုံ့ကြည်ပါသည်။ ယခုအခါ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လိင်တူချစ်သူ(အမျိုးသား)များအတွက်ရဟန်းပြု၍ ရနိုင်မရနိုင် ဟူသော ကိစ္စသည်ဒွိဟဖြစ်ခြင်း အမှုသို့ ရောက်ရှိနေရပါသည်။ ယခုစာရေးသူလေ့လာတွေ့ရှိသော အချက်အချို့သည် ယင်းဒွိဟဖြစ်ရသော ကိစ္စအား ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။
ပထမဦးစွာ သတိပြုစေလိုသည်မှာ မြတ်ဗုဒ္ဓကဲံ့သို့သော အတုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည် လူတန်းစားခွဲခြားလိုသော ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သည်ကို မြတ်ဗုဒ္ဓပွင့် တော်မူရာခေတ်အခြေအနေ ကိုဆင်ခြင်၍လည်းကောင်း ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်များအားလေ့လာခြင်းဖြင့်လည်း မြတ်ဗုဒ္ဓသည် ပထမဆုံး လူတန်းစားခွဲခြားမှု၊ယောက်ျား မိန်းမလိင်ခွဲခြားမှု တို့ကို ပထမဆုံး တိုက်ဖျက်ခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ် ဟုသိရှိနိုင်ပေသည်။
ပါဠိ ဘာသာဖြင့် ပဏ္ဍုက်ဟုခေါ်ဆိုသော လိင်တူချစ်သူ အမျိုးသားတို့သည် ဗုဒ္ဓပွင့်ရာ ကာလတွင်အထင် အရှား ရှိကြလေသည်။ မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားသောဝိနည်းဥပဒေတော်ကြီးတွင် တိအလင်းပါဝင်ထား၏။ သံဃာတော်များ ဆွမ်းခံ့ရန်မသင့်တော်သော နေရာများဟူ၍ တားမြစ် တော်မူထားသော နေရာများတွင် ပဏ္ဍုက်တို့အိမ်ပါ၏။ မြတ်စွာဘုရား လက်ထက် သံဃာရတနာအလွန်စည်းပွားတိုးတက်ချိန်တွင် ပဏ္ဍုက်တို့သည် လည်းသံဃာ အဖြစ်သို့ဝင်ရောက်၍ အခြား သောသံဃာတို့နှင့် မလျှောသောနေထိုင်မှုကိုပြုကြလေရာ အခြားသောတိတ္ထိဂိုဏ်းဝင်များက သံဃာရတနာ အား ပုတ်ခပ် ပြောဆိုခြင်းအမှုကိုပြုကြသဖြင့် ဘုရား၇ှင်၏ ဥပသိကာ ဥပါသိကာမတို့လည်း မြတ်ဘုရားအားလျှောက်ထားသောကြောင့် ဘုရား၇ှင်သည် ရ ဟန်းပြုရာ၌ သိမ်အတွင်းကံဆောင်စဉ် "သင်ယောက်ျားစင်စစ်ဟုတ်ပါရဲ့လား" ဟူသော မေးခွန်းပေါ်ပေါက် လာခဲ့ရသည်။
သို့သော်မြတ်စွာဘုရား၇ှင်သည် လူသားတို့အပေါ်ကြီးသော ကရုဏာထားသည့်အပြင် ခြားခြင်းမ၇ှိ သော အနှိုင်းမဲံ့ကရုဏာ၇ှင်ဖြစ် ရကား ပဏ္ဍုက်များအပေါ်တွင် လည်းများစွာ ကရုဏာထားတော်မူ ကြောင်းကို အဌကာထာ ဆရာတော်များ၏ ဖွင့်ဆိုချက်များတွင်တွေ့၇ှိနိုင်သည်။
ကင်္ခါဝိတရဏီအဌကထာ နှာ-၁၀၄ ၊ပါရာဇိက ကဏ္ဍ ပထမပါရာဇိက၀ဏ္ဏနာ ဒုပုဒ် ကြောင်းရေ ၄တွင် 'ပဏ္ဍကာဒယော ၀ဇ္ဇနှီယပုဂ္ဂလ ကထာယံ ၀ုတ္တာ၊ တေသု အာသိတ္တပဏ္ဍကဉ္စ ဥသူယပဏ္ဍကဉ္စ ဌပတွာ ဩပက္ကမိကပဏ္ဍကော နပုံသကပဏ္ဍကော ပဏ္ဍကဘာဝပက္ခေဌိတော ပက္ခပဏ္ဍကော စ ဣဓ အဓိပ္ပေတော။
ဆီလျှော်စွာပြန်ဆိုရလျှင်မူ "ပဏ္ဍုက်အစ၇ှိသော အပြစ်နှင်တကွဖြစ်သော ရဟန်းအဖြစ်မရ၇ှိ ထိုက် သော အဘဗ္ဗပုဂ္ဂိုလ် (၁၁) ယောက် တို့အကြောင်းအားဆိုဦးအံ့၊ ထိုပဏ္ဍုက်အစ၇ှိသော အပြစ်နှင်တကွဖြစ်သော ရဟန်း အဖြစ်မရ၇ှိထိုက်သော အဘဗ္ဗပုဂ္ဂိုလ် (၁၁) ယောက်တို့တွင်မှ အာသိတ္တကပဏ္ဍုက်၊ ဥသူယပဏ္ဍုက် တို့ကို ကြဉ်ထား၍ ဩပက္ကမိကပဏ္ဍုက် ၊ နပုံသကပဏ္ဍုက်တို့သည်ကား အလျှင်းရဟန်းမပြုကောင်း၊ ပက္ခပဏ္ဍုက်သည်ကား ရံခါရဟန်းပြု ကောင်း၏ ဟု ဤ၌ အဓိပ္ပယ်ရ၏။"
မြန်မာလိုတော့ "ပဏ္ဍုက်အစ၇ှိသော အပြစ်နှင်တကွဖြစ်သော ရဟန်းအဖြစ်မရ၇ှိထိုက်သော အဘဗ္ဗပုဂ္ဂိုလ် (၁၁) ယောက်တို့ အကြောင်းအားဆိုဦးအံ့၊ ထိုပဏ္ဍုက်အစ၇ှိသော အပြစ်နှင်တကွဖြစ်သော ရဟန်းအဖြစ်မရ၇ှိ ထိုက်သော အဘဗ္ဗပုဂ္ဂိုလ် (၁၁) ယောက်တို့တွင်ပါဝင်သော ပဏ္ဍုက်တို့ထဲတွင်မှ အာသိတ္တကပဏ္ဍုက်၊ ဥသူယပဏ္ဍုက် တို့သည်ရဟန်းပြုကောင်း၏၊ ဩပက္ကမိကပဏ္ဍုက် ၊ နပုံသကပဏ္ဍုက် တို့သည်ကား လုံးဝရဟန်းမပြုကောင်း ၊ပက္ခပဏ္ဍုက် သည်ကား ပဏ္ဍုက်ပက္ခလွန်ရာအခါ၌ ရဟန်းပြုကောင်း၍ ပဏ္ဍုက်ပက္ခ၌တည်ရာ၌ရဟန်းမပြုကောင်း" ဟု အဓိပ္ပါယ်ရလေ၏။
ဒီနေရာမှာ ပဏ္ဍုက်ရဲ့ အဓိပ္ပယ်ကိုသေချာသိဖို့လိုပါသည်။ ပဏ္ဍုက်အားအနက်ပြန်ဆိုရာတွင်မူ လိင်အဂါင်္ချို့ တဲ့သူ့ဟူ၍ ပြန်ဆိုထားပါသည်။ သို့သောလိင်တူချင်းချစ်သူများကိုလည်း နှောင်း ခေတ် ပညာ ရှင်များမှ ထည့်တွင်း၍ အဓိပ္ပယ်ယူ သည်ကိုတွေ့ရသည်။ပါဠိဘာသာ၏ စည်းမျဉ်းအရပင် ဖြစ်သည်။ ဘုရား၇ှင်မှ ပဏ္ဍုက်အား(၆) မျိုးခွဲခြားထား သည်။ ယင်းတို့မှာ .................
(၁)အာသိတ္တကပဏ္ဍုတ်= သူတစ်ပါး၏အဂါင်္ဇာတ်ကိုစုပ်၍သုတ်သွန်းမှရာဂငြိမ်းသူ ( အင်း ရှင်းရှင်းပြော ရရင်ကန်တော့နော် သူများပစ္စည်းကိ်ုစုပ်ပြီး သူများက သုတ်လွှတ်ပေးလို့က်မှ ရာဂငြိမ်းတဲ့သူလို့ပြောတာ...။ "ကီးသမား၊ပလွေသမားတွေပေါ့ကွယ်"...း)
(၂) ဥသူယပဏ္ဍုတ် = သူတစ်ပါးမေထုန်ပြုသည် ကိုကြည့်၍ငြူစူမှရာဂငြိမ်းသူ
(အဲ့ဒါကတော့ သူများတွေလိင်ဆက်ဆံတာကိုကြည့်ပြီး အာသာပြေတဲ့လူတွေ ဥပမာ အတွဲချောင်းတဲ့လူတွေ အပြာကား ကြည့်တဲ့လူတွေ၊ အလွန် အကျူး စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူများကို ဆိုလို သည်၊ (ကာဗာ လုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါး) စိတ်ပညာအရလည်း ယင်းကိုရောဂါတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါသည်။)
(၃) သြပက္ကမိကပဏ္ဍုတ်= ဝှေးစေ့ထုတ်အပ်သူကိုခေါ်သည်။
(နတ်ကွပ်ဟု အပြင်တွင်လူပြောများသော မွေးရာပါများသာမက အကြောင်းကြောင့် ထုတ်ရသူ့များ လဲပါပါသည်၊ ရှေးတရုတ်မင်းဆက်များထဲမှ ကုန်းကုန်းတွေလိုပေါ့း)
(၄)ပက္ခပဏ္ဍုတ်= လဆုတ်ပက္ခ၌ ရာဂပူပန် ၍လဆန်းပက္ခ၌ရာဂငြိမ်းသူ
(ယင်းပုဂ္ဂိုလ်များသည် သာမန်ချိန်၌ ယောက်ျားစင်စစ်ဖြစ်သော်လည်း ပဏ္ဍုက် ပက္ခတည်ရာ တွင် ပဏ္ဍုက်စိတ်ဝင် ၏၊မိန်းမပုံသို့လုံးလုံးပြောင်းသွား၏။ တစ်ပက္ခတွင် ၁၅ ရက်ရှိ၏၊လပြည့်လကွယ် မြန်မာလနှင့်တွက်၏)
(၅)နပုံးပဏ္ဍုတ်(နပုံသကပဏ္ဍုက်)= ယောကျာ်းဘာဝရုပ် မိန်းမဘာဝရုပ်ကင်းသူ
(ယင်းပုဂ္ဂိုလ် များသည် မွေးကတည်းကပင် မည်သည်အင်္ဂါမျှ မပါသူများဖြစ်သည်။ ယင်းအဖြစ်မျိုး ဖြစ်နိုင် သည် ကို သီဟိုလ်ပြည်(ယခုသီရိလင်္ကာ) မူလသောမကျောင်းတွင်သီတင်းသုံးခဲ့၍ သဂြိုဟ်လက်သန်းကျမ်းကို ပြုစုတော်မူသော အရှင်အနုရုဒ္ဓါမထရ်၏သဂြိုဟ်လက်သန်းကျမ်း အဘိဓမ္မာသင်္ဂဟ ပါဠိတော်( ယခု အစိုးရ ပထမပြန် ငယ်၊ လတ်၊ကြီး စားမေးပွဲများတွင်သာမက ရန်ကုန်၊မန္တလေး အသင်းစာမေးပွဲ(အဘိဝံသ၊လကာင်္ရ စာမေးပွဲ) များတွင် ပင်ပြဌန်းစာအုပ်အဖြစ် သင်ကြားရသော စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်) ရုပ်ပိုင်း စာပုဒ် (၅၄)တွင်
" တတ္ထာပိ ဘာဝဒသကံ ကဒါစိ နလဗ္ဘတိ " မြန်မာပြန်-ထိုသုံးပါးသော ဒသကတို့တွင်လည်း ဘာဝဒသက (ယောက်ျားအဖြစ်၊မိန်းမအဖြစ်) ကိုရံခါမရ အပ် ဟု ထင်ရှားစွာပြထား၏။)
(၆) ဥဘတောဗျဉ်း= ယောကျား၊မိန်းမလိင်အင်္ဂါနှစ်ခုပါသူ၊
(ယင်းတို့မှာအပေါ်မှနပုံးပဏ္ဍုက်နဲ့ပြောင်းပြန်ပင်ဖြစ်၏၊ ယခုခေတ်၌ ၎င်းတို့အား Intersexဟုခေါ်ဆိုလေ၏၊ ယောက်ျား အင်္ဂါစပ်၊မိန်းမအင်္ဂါစပ်၂မျိုးလုံး ထင်ရှားစွာ၇ှိလေ၏)
အထက်တွင်ဖေါ်ပြထားသောအဌကထာ၏ အဆိုအတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။ အာသိတ္တက ပဏ္ဍုတ်၊ ဥသူယပဏ္ဍုတ် တို့သည်သာ ရဟန်းပြု၍ ရလေ၏၊ သြပက္ကမိကပဏ္ဍုတ်တို့မှာမူ ယောက်ျား ဟု၍ အသိအမှတ်ပြု ရာဖြစ် သော အထိန်းအမှတ်ကွယ်ပျောက်နေသောကြာင့် ယောက်ျား စင်စစ်ဟုမဆိုနိုင်ပေ၊။ နပုံးပဏ္ဍုတ်(နပုံသကပဏ္ဍုက်)တို့မှာမူ လိင်အဂါင်္သတ်မှတ်နိုင်မှုမရှိသောကြောင့် ဖြစ်၏။ ဥဘတောဗျဉ်းမှာမူ လိင်အဂါင်္၂ခုလုံးပါဝင်သောကြောင့် မည်သို့မျှသတ် မှတ်၍မရနိုင်ပေ။ အကယ်ရဟန်းပြုပါက မည်သို့ သတ် မှတ်မည်နည်း၊ ရဟန်းမလော့ ရဟန်းလော.၊ ထို့သို့တွက်ဆ ကြည့်လျှင်မူ ကောင်းစွာသိရှိပေလိမ်မည်။
ပက္ခပဏ္ဍုက်များမှာမူ မိမိယောက်ျားအသွင်၇ှိနေစဉ်အတွင်း ရဟန်းပြု၍ ရနိုင်ပေ၏၊ ရတောင့် ရခဲ့ ရဟန်းအဖြစ်သို့ရောက်စဉ် ခဏပင်ဖြစ်စေကာမူကောင်းစွာကျိုးစာအား ထုတ်လျှင် မိမိ် ဥာဏ် ၇ှိသ လောက် အကျိုးရှိမည် ပင်ဖြစ်သည်။ ယခုခေတ်အခေါ် လိင်တူချစ်သူများနှင့် ပတ်သတ်၍ ရှင်းလင်းပါဦးမည်။ Lesbian (လပ်ဘီယံ) များတွင်ပါ ၀င်သော ယောက်ျားစိတ်ပေါက်သော အမျိုးသမီးများမှာလည်း ရဟန်း ပြု၍ မရပါ။ Gay (ဂေး) ဟုခေါ်ဆိုသေ လိင်တူချစ်သူအမျိုးသားများတွင်မူ အထက်တွင်ဖော်ပြသော အချက် အလက်များ နှင့် ညီလျှင်မူဝတ်၍ရပါသည်။ Bisexual များမှာမူလည်းဂေးနှင့်ထပ်တူပင်ဖြစ်၏။ အထူးပြဿနာ များနိုင်သော Transgender(လိင်ပြောင်းသူ) များမှာ ရဟန်းပြု၍ မရနိုင်ပေ၊ အဘယ် ကြောင့် ဟူမူကား အရှင်အနုရုဒ္ဓါမထရ်၏သဂြိုဟ်လက်သန်းကျမ်း အဘိဓမ္မာသင်္ဂဟ ပါဠိတော်ရုပ်ပိုင်း ၅၄ တွင် လိင်ပြောင်းရုံ ဖြင့် အမှန်တကယ် မပြောင်းလဲနိုင် ကြောင်းကို "ဂဗ္ဘသေယျက သတ္တနံ ပန ကာယ ဘာဝ ၀တ္ထုဒသကသခါင်္နိ တီဏိ ဒသကာနိ ပါတုဘ၀န္တိ။"
သံသေဒဇသြပပါတိက ပဋိသန္ဓေမှတပါး ဂဗ္ဘသေယျပဋိသန္ဓေကို ဆိုဦးအံ့၊ အမိဝမ်းတွင်းမှ ကိန်းကုန်သော သတ္တ၀ါတို့အား ကာယဒသက၊ ဘာဝဒသက (ဣတ္ထိဘာဝဒသက(မိန်းမအဖြစ်)၊ ပု မ္ဘာဝဒသက (ယောက်ျားအဖြစ်)) ၊ ၀တ္ထုဒသကဟု ဆိုအပ်ကုန်သော ၃ပါးသော ဒသကတို့သည် ထင်ရှားဖြစ်ကုန်၏။ ဟူ၍ ထင်ရှားတွေနိုင်၏၊ ထိုပြင် ယင်းလိင်ပြောင်းလဲ ထားသူများသည် နေ့စဉ် မိမိတို့ပြောင်းလဲထားသည် လိင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဟော်မုန်းအားတိုးဆေးများ အားသောက်သုံး နေရခြင်းသည် ယင်းအဆိုမှန်ကန်ကြောင်း တနည်းတဖုံ ထောက်ခံနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
သို့သော် ယင်းစာပုဒ်ကိုထောက်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသားမှ အမျိုးသမီးအဖြင့် လိင်ပြောင်းထားသော Transgender (လိင်ပြောင်းသူ) များရဟန်းပြု ၍ ရပါသလားဟူသောမေးခွန်းမှာမူ အတန်ဖြေ၇ှင်း ရခက်ခဲနိုင်ပေ၏၊ အမျိုးသမီးယောဂီ အဖြင့်ကား ၄င်းတို့အတွက်သာ၍ အဆင်ပြေနိုင်ပေသည်။ ထိုပြင် ဓမ္မာအဘိသမပဉ္စပါဠိတော်.တွင်ပါဝင်သော မဂ်ဖိုလ် မရနိုင်သူ တွေထဲမှာပါသော ပဏ္ဍုက်ဆိုသည်မှာ ရဟန်းလုံးဝပြုမရသော ဩပက္ကမိကပဏ္ဍုက် ၊ နပုံသကပဏ္ဍုက်၊ ဥဘတောဗျဉ်း= ယောကျား၊မိန်းမလိင်အင်္ဂါနှစ်ခုပါသူ၊တို့ကိုသာခေါ် ဆိုခြင်းဖြစ်၏ ။ ယင်းတို့သည် မွေးရာပါ(၀မ်းတွင်းပါ) ချို့တဲ့ သူများဖြစ်လေသည်။ အဘိဓမ္မာပါဠိတော်တွင် ယင်း အဖြစ်နှင့်လူ့ဘ၀သို့ ရောက်၇ှိလာသူများသည် သုဂတိအဟိတ် ၊ဒွိဟိတ်များဟုခေါ်၏။ ယင်းတို့သည် ပဏ္ဍုက်ဖြစ် မှသာမဟုတ် အခြား မွေးရာပါ မျက်မမြင် များဆွံ့အနားမကြားများ၊ အခြားမွေးရာပါချို့တဲ့သူ အာ်းလုံးအားခေါ်၏၊ ယင်းတို့တွင် ယခုဘ၀၌ မဂ္ဂ်၊ဖိုလ် နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ရန် ဥာဏ်စွမ်းရည်ချိုတဲံ့ နေကြောင်းကို အရှင်အနုရုဒ္ဓါမထရ်၏သဂြိုဟ်လက်သန်းကျမ်း အဘိဓမ္မာသင်္ဂဟ ပါဠိတော် ၀ီထိပိုင်း ပုဂ္ဂလဘေဒ ၄၁ ၌
"တထာ ဥာဏသမ္မယုတ္တ ၀ိပါကနိစ သုဂတိယံ နလ ဗ္ဘ န္တိ"
"ထို့အတူ ဒွိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်၊ သုဂတိအဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဥာဏသမ္ပယုတ် မဟာဝိပါကစိတ်(ဈာန်မဂ္ဂ်ဖိုလ်ရနိုင်သောဥာဏ်) တိုကိုလည်းမရအပ်ကုန်" ဟူ၍ ဖော်ပြထား၏။
ယင်းသို့မရနိုင်သောကြောင့် စိတ်ပျက်အားငယ်ရန်မရှိ သင့်ပေ။ ယခုကြိုစားအားထုတ်ခြင်းသည် နောင်ဘဝ၌ မဂ်္ဂဖိုလ်ရရန် ကြီးစွာသော အထောက်အပံ့ ဖြစ်လေ၏။ သံသရာနှင့်ကံနှင့် ကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်ကြသူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တို့အတွက်မူ လိင်တူချစ်သူများအား နားလည်ခြင်း စာနာခြင်းသာဖြစ်သင့်၏၊။ မြတ်ဘုရား၏အလိုအရမူ ယောင်္ကျား၊မိန်းမ၊ ယောက်ကရှာ မိန်းမရှာ မရှိ၊ အားလုံးသောအရိုး၊အညှိ၊ အညစ်ကြေးများအား အပ်တဖျားမျှသော အရေ ဖြင့်သာဖုံးလွှမ်း ထားသော သတ္တ၀ါများသာဖြစ်၏။ မိမိလူဘ၀သို့ရောက်၇ှိစဉ်ခဏ မိမိ၏ အငှားခန္ဓာအားမက်မောတွယ်ငြိ တပ်မက်ခြင်းမရှိပဲ အကျိုးရှိအောင်အသုံးချသင့်ပေ၏။
(အထူးကျေးဇူးတင်ခြင်းဤစာမူရေးဖြစ်အောင်အထူးတိုက်တွန်းကြပါသောလုလင်လန်းပတ်(စင်ကာပူ)၊ ၀ိုင်ဝိုင်း(ခေတ္တ တောင်သမုဒ္ဒရာ) ewinewin@gmail.com အချက်အလက်များအား အသေးစိပ်ရှင်းပြကူညီသော ကိုမျိုး komyo@gmail.com ၊ နှင့် လိင်တူချစ်သူများနှင့် ဆိုင်သောအချက်အလက်များအား ကိုးကားခွင့်ပြုသော www.myanmarhomosexual society.com မှWeb site owner စည်သူနှင့် မော်ဒရေတာ ကပီချီနို(ရဲကို) www.mymgedu.com မှ MgEdu Administration မှ အဖွဲ့ဝင် (၈)ဦးလုံးနှင့် ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူ အားလုံးအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်)
(အထူးသတိပေးချက် ဤစာမူပါအချက်အလက်များအား တစိတ်တပိုင်းဖြစ်စေ စာမူတခုလုံးအားဖြစ်စေ ကူးယူဖော်ပြလိုပါက မိမိကူးယူဖော်ပြသော ၀ဘ်ဆိုဒ် လင့် အားဖော်ပြခြင်းဖြင့် ကူးယူဖော်ပြကုသိုလ်ယူနိုင်ပါသည်။)
စာကြွင်း။ ။ မြန်မာစကားလုံးအကျအပေါက် လေးများနှင့် စာစီမှုအဆင်မပြေတာလေးများမှာ မူရင်းစာရေးသူ ညအုပ်စိုး (ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်-မန်းလေး) ၏အချိန်အားလပ်မှုနည်းခြင်း၏ ချို့ယွင်းချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါကြောင်း
Posted by Alex Aung at 12:41 PM